Iintsimbi zeMidlalo yobuNtshatsheli kunye neeRingi zeklasi, abavelisi beeKhonkco abaThengi | Ubucwebe bukaByer
Ubucwebe be-Byer yeyona nto ilungileyo yabenzi bemisesane.Wamkelekile ukuba undwendwele umzi-mveliso wethu.
Ixabiso eliphantsi le-Byer. yeyona mveliso ilungileyo yobucwebecwebe eTshayina, siye saziqhelanisa nokuveliswa kwemisesane yesiko. Iimveliso zethu kubandakanya iRingi yoKhuphiswano lweSiko, iRingi yeKlasi, iRingi yoMkhosi, iRingi yokutyikitya kunye neNdonga yeMasonic. Ukubonelela ngeeNkonzo zeZacholo zoMbane, nazo.
Ikhonkco yoKhuphiswano yesiqhelo
Abaqulunqi bethu abaziingcali banokwenza ubugcisa be-3D yasimahla njengezicelo zabathengi ngaphakathi kweeyure ezili-12 kwaye benze utshintsho kwangexesha. Igama lokudlala eliqhelekileyo, inombolo kunye nesikhundla ziyafumaneka kuthi. Kwakhona ungenza ngokusesikweni amatye iimilo ezahlukeneyo kunye nemibala.
Iringi yeklasi yesiqhelo
Ngaba ujonge umsesane wakho okanye weqela lakho sinokukunceda ukuba uyiqonde loo nto Iqela lethu loyilo lobuchwephesha liza kusebenza nawe ukwenza isiqwenga sobugcisa. Unokwenza igama lesikolo ngokwezifiso, igama lomfundi kunye nonyaka wokuthweswa isidanga kuringi.
Iringi yesiqhelo yamaKhosi yamadoda
Uphawu lozuko kunye nempumelelo yeqela lakho, yiza wenze umsesane oyingqayizivele nathi. Unokuba nelogo yakho eringini.
Umsesane wokutywina oqhelekileyo
Ngaba ujongana neqela ozilungiselela lona? Wecanhelpyouacheivethat. I-Ourexpert designteamwillworkwithyoutocreatapieceofart. I-Youcancustomizenameame, unyakaokhethekileyologoonthering.
Ukuba ukhangela umsesane wena okanye iqela elikhethekileyo, sikufumene. Iqela lethu lobuchule loyilo lwe-3D liza kusebenza nawe ukwenza uyilo olukhethekileyo.
1. Khetha itemplate enye.
2. Sithumelele iilogo zakho kwaye usazise apho ufuna ukubeka khona iilogo.
3. Singenza uyilo lwe-3D.
4. Thumela i-invoyisi emva kokuqinisekisa uyilo.
5. Imveliso emva kwentlawulo.
6. INkonzo eKhethekileyo yesiqhelo
Yasekwa ngo-2006, i-ByerJew jewelry ngumenzi ophambili woyilo lwesiko, imveliso kunye nentengiso e-China. Iimveliso eziphambili zibandakanya amakhonkco obuNtshatsheli, amakhonkco oMkhosi, amakhonkco eKlasi, amakhonkco eMasonic, amakhonkco eNkampani njalo njalo. Igama lokudlala elahlukileyo, inombolo kunye nesikhundla ziyafumaneka kuthi. Sinako ngokusesikweni amatye iimilo ezahlukeneyo kunye nemibala.
Sinento mveliso yethu yobungcali
Umzi mveliso wethu uvelisa ubuntshatsheli, isangqa sodidi njalo njalo
Sineqela lobuchule be-3Ddesign
Abaqulunqi bethu banokubonelela ngemisebenzi yasimahla ye3d ngaphakathi kweeyure ezi-4 zokuqinisekiswa kwabathengi.
Samkela ulwenziwo olukhethekileyo
amakhonkco ethu ungenziwa ngemfuneko igama lomdlali ezahlukeneyo, No POS, kunye namatye ezizodwa.
Sinokwenza uhlengahlengiso olukhethekileyo ukuba awulunganga
Igama lomdlali oqhelekileyo, i-POS., Ubungakanani bomnwe, ukukrola akulunganga, sinokuyilungisa loo nto
Iqela le-3D loyilo.
Eyasungulwa ngo-2006, i-Byer Jewelry Limited iyona mveliso ehamba phambili yoyilo lwezinto zokugqoka, ukuveliswa kunye nokuthengiswa e-China, iimveliso eziphambili zibandakanya iindandatho ze-Championship, izindandatho zempi, izindandatho zeklasi, amasongo eMasonic, amakhonkco eenkampani njalonjalo. Izinto eziphambili: 18K, 14K, 10K igolide, isilivere, ubhedu, intsimbi engenasici, i-alloy, Unokukhetha ilitye le-CZ, idayimane, ilitye lokufakelwa.
Iqela lethu loyilo lobugcisa linokuyila ubugcisa be-3D yasimahla kwizicelo zabathengi ngexesha leeyure ze-12 kwaye benze utshintsho kwisiqinisekiso sabathengi. Iingcibi zethu ezinezakhono zinokwenza i-NAME eyahlukileyo, iNombolo, i-POS, amatye emilo ekhethekileyo, umbala we-pantone enamel njlnjengesangqa ngasinye ngokwezicelo zabathengi. Sikwanazo neQA yobungcali, iqela leQC kwaye senza imigangatho yeQC eneenkcukacha, iringi nganye ihlolwe nganye nganye ukuqinisekisa umgangatho ophezulu ngaphambi kokuhanjiswa, kwaye yanelisa wonke umthengi.
Shiya i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhakamshelwano ukuze sikuthumele ikowuti yasimahla kuluhlu lwethu olubanzi loyilo!